Yemunharaunda Kubata kana Yepasi Pose Kubata, ndeipi yaunofanirwa kushandisa? | ECommerce nhau
Yemunharaunda Kubata kana Yepasi Pose Kubata, ndeipi yaunofanirwa kushandisa?
Sarudza nzvimbo yekugamuchira yako webhusaiti kana Ecommerce Zvakakosha kwazvo. Pane zvinhu zvinoverengeka zvekutarisa, zvinosanganisira mutengo, kuvimbika, uye kumhanya. Kufunga pakati pe Yemunharaunda Kubata uye Yepasi Pose Kubata inoda kuongororwa kwakadzama.
Yemunharaunda Kubata vs Yepasi Pose Kubata
Kutanga iwe unofanirwa kunzwisisa kuti mabhizinesi madiki anoda kuchengeta bhajeti rakaomarara uye nekudaro chero hurongwa hwekubata pamusoro pe $ 10 pamwedzi hausviki. Musiyano maererano ne mutengo weKunharaunda Kubata uye neInternational Hosting inogona kusiyana zvakanyanya.
Chokwadi nyika ine yakakwira kana yakaderera mitengo kupfuura dzimwe, zvisinei mune dzakawanda nyika dzakabudirira mune zvehupfumi, nemari dzisinganetsi kudarika dhora, isingadhuri webhu inomiririra vanopa vanogona kuwanikwa. Naizvozvo zvine musoro kuti iwe unogona kuwana webhu yekutambira hurongwa zvinoenderana nezvinodiwa neyako kambani ine International Hosting.
Kunyangwe izvi, zvakakosha kuti uchenjere uye uongorore zvese zvingasarudzwa. Naizvozvo, zvakakosha kuti uongorore kumashure kune anopa, kusanganisira basa rayo, kuvimbika, pamwe nekutsvaga mhinduro kubva kune vamwe vashandisi nezve zvingangokanganisa.
Kune rumwe rutivi, a Yakachipa uye yakavimbika yekutambira yakaoma kuwana. Izvo zvinogara zvichikurudzirwa kutarisa iko kurodha kumhanya kwenzvimbo. Rangarira kuti kana peji rewebhu rinotora nguva yakareba kuti riratidzwe, vanhu vazhinji vanongosarudza kusiya saiti. Uye ivo vanowanzozviita neratidziro isiriyo yekambani kana chigadzirwa.
Kune izvi unofanirwa kuwedzera izvo kana iwe uchinge wasvika sevha kubva kune imwe nyika, panogona kuve nekunonoka nekuda kweruzivo rwuri kutumirwa kubva kune imwe nzvimbo yepasi kuenda kune imwe. Kunyangwe kunonoka uku kungave kusipo, dambudziko neInternational Hosting nderekuti inogona kukanganisa kurodha kwekumhanyisa saiti yako.
Mukupedzisira zvingangove zvakachengeteka kusarudza a Yemunharaunda Kubata, kunyanya imwe inovimbwa uye inomhanyisa kana kunyangwe kushomeka kwayo hakukanganisa mashandiro ezuva nezuva ebhizinesi rako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » nemitambo » Yemunharaunda Kubata kana Yepasi Pose Kubata, ndeipi yaunofanirwa kushandisa?
Iwo matatu akakosha makiyi ekubudirira kwe StartUps
Shopp, WordPress plugin kune yako Ecommerce